NoFRAUD - Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt NoFRAUD | Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt
Bogga ugu weyn NoFRAUD
WAA KUMA CAYAAR?
NoFraud waa xalka kahortaga khayaanada ee Schmidt Schmidt Market uu iskaashi la sameeyay. Waxay baaraan macaamil ganacsi iyaga oo matalaya meheradaha waxayna u digayaan haddii ay ogaadaan in macaamil ganacsi uu qatar weyn ugu jiro khayaanada. Tani waxay ka ilaalinaysaa macaamiisha isticmaalka kaarka deynta aan la fasaxin waxayna ka ilaalinaysaa ganacsiyada ka hortagga dib-u-celinta khayaanada.
Maxaan u helayaa emayl / wicitaan / fariin qoraal ah si aan u xaqiijiyo macaamil ganacsi?
Waxaad heshay emayl digniin ah / wicitaan / fariin qoraal ah maxaa yeelay macaamilkaagu wuxuu lahaa astaamo ganacsi oo aan caadi ahayn iyo / ama khatar sare. Suuqa Kirismaska ​​ee Schmidt wuxuu rabaa inuu xaqiijiyo in macaamil ganacsi uu sameeyay qofka haysta kaarka ee idman.
Kadib markaan xaqiijiyo macaamil ganacsi, ma waxaan ubaahanahay inaan sameeyo wax kale?
Ka dib markaad xaqiijiso macaamil ganacsi ma jiraan wax kale oo aad u baahan tahay inaad sameyso mooyee haddii aan lagu weydiin kalkaaliye khayaano inuu ku siiyo macluumaad dheeraad ah.
NoFraud waligey ma i weydiin doontaa macluumaadkeyga shaqsiyadeed?
NoFraud waligeed kuma weydiin doonto lambarkaaga kaarka deynta oo buuxa, lambarka amniga bulshada, ama macluumaad kale oo shakhsi ah.
Amarkayga dib ma u daahi doonaa?
Isla marka jawaabtaada la helo, amarkaaga waa la sii dayn doonaa si loo farsameeyo.
Ma aanan sameyn macaamil ganacsi mana sameynin cid kale oo heli karta kaarka deynta. Maxaan sameeyaa hadda?
Ka dib markaan xaqiijino in macaamilku runtii ahaa mid aan la fasaxin, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto shirkadda kaarkaaga deynta oo aad u sheegtid in kaarkaaga waxyeelleeyeen. Dib u eeg macaamilkii ugu dambeeyay ee koontadaada si aad u hubiso inaysan jirin waxqabad kale oo been abuur ah oo la soo sheegayo. Hay'addaada maaliyadeed waxay u badan tahay inay hakad gelin doonto dhammaan iibsiyada mustaqbalka ee koontada la jabsaday waxayna soo saari doontaa mid cusub oo mustaqbalka loo adeegsado.
Sideen wax badan uga ogaan karaa NoFraud?
Waxaad ku booqan kartaa boggooda internetka nofraud.com si aad wax badan uga barato